Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance I-Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa ngokuthi Kimpembe. Indaba yethu ye-Presnel Kimpembe Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uyingxenye yamadoda we-23 Isiqhema saseFrance lowo owawuthola I-2018 World Cup eRussia. Kodwa-ke, bambalwa abathinta uCopinal Kimpembe Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
U-Presnel Kimpembe wazalwa ngo-13th ka-Agasti 1995 eBeumont-sur-Oise, eFrance. Wazalwa noyise u-Isaac Kimpembe no-a Haitian umama oncane owaziwayo ngaye.
Njengoba ekhula eFrance, u-Young Kimpembe (okufanekiselwa phakathi kwabafowabo ababili abadala) wayebathandeka abazali bakhe ababenesifiso esiningi futhi baqinisekisa ukuthi unesibambiso esiningi esasithandayo.
Ngaphezu kwalokho, bamnika ithuba lokuphishekela ukuthanda kwakhe ibhola ngokumbhalisa NJENGOBA Eragny ku-2002 ngenkathi eneminyaka engu-7 ubudala. Ngenxa yalokho, uKimpembe onjengezinkanyezi eziningi zebhola lezinyawo uqale umsebenzi wakhe webhola ngokudlala amaqembu amasha.
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Buildup
UKimpembe wachitha iminyaka emithathu NJENGOBA Eragny ngaphambi kokuthuthela ephikweni lezintambo ze-French top flight club, eParis Saint-German ku-2005 (ngokumenywa yi-PSG scouts).
Kwakukhona esikoleni se-Paris Saint Germain yentsha yokuthi ukunyuka kwebhola lebhola kwaba yindlela ehlala isikhathi eside ye-PSG ngemuva kokuthi athuthukise izimfanelo zakhe zebhola zamanje njengale; ukuzinza, ukufunda umdlalo nokudlala.
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Eminyakeni eyisishiyagalombili kamuva, uKimpembe uphakanyiswe eqenjini eliphezulu le-PSG e-2013 futhi wenza i-debut yakhe yokuqeqeshwa eqenjini ngo-Okthoba 2014. Umbukiso wakhe ophikisanayo wendlela enhle emidlalweni yeqembu futhi ukuvumelanisa nokushintsha izindima kuye kwamthokozisa abamhloniphayo abacabanga ukuthi ufanelwe ukuqala njalo.
Ophawulekayo phakathi kwabadlali beKimpembe wayenguFrance no-Arsenal, umlindi uWilliam Gallas, owambiza ngokuthi "ikusasa lebhola leFrance". Ukusheshisa kakhulu ukuthi uKimpembe usuke eveze ukuthi kuzoba yikusasa leFrance Football by amassing eziningi isihloko wins for club kanye nemiphakathi kuhlanganise Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophee des Champions kanye 2018 World Cup eRussia. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Isidlali ngasinye sesiFulentshi siyi-wag enhle noma i-Girlfriend neKimpembe icala akuyona into ehlukile. Umdlali othembisayo unogada omuhle ohamba ngegama uSara.
Nakuba okuncane kuyaziwa ngobuhlobo babo obunikezwa ukuthi uKimpembe naye uthanda ukugcina impilo yakhe yangasese. Kodwa-ke, uSara uphuma njengenqola enhle uKimpembe angathanda ukugcina kuzo zonke izindleko.
Ubuhlobo babo buveze indodana eyayiziqhenya ngayo uKimpembe futhi engalokothi iphele ukumbonisa emidlalweni yezenhlalakahle nge-relief relief. Uchaza leli "Lion Lion" elibonisa indlela i-lioness ithwala ngayo i-cub.
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukusekelwa kwabazali
UKimpembe unomndeni onothando osekela umsebenzi wakhe futhi akalokothi ayeke ukumsiza ngokuziphatha.
Ubaba wakhe ungumbukeli ohlala njalo obuka lapho edlala khona. Ukuba khona kwakhe kukhonza ukukhumbuza inkanyezi isidingo sokuba phezulu komdlalo wakhe.
Kungashiwo okufanayo ngokamama kaKimpembe echaza ngokuthi:
Owodwa ongeke angishaye icala, yedwa engingangabazi, owodwa ongazange angivumele phansi futhi ukuthi kusukela ezinyathelweni zami zokuqala ❤️ Mama ❤️
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Imisebenzi Yesikhashana
UKimpembe nguye owazi ukuthi angasebenzisa kanjani ukuchitha isikhathi sakhe nemisebenzi yokufanisa ngengqondo. Ufeza lokhu ngokudlala imidlalo yevidiyo futhi ngezikhathi ezithile ubukela ama-movie ukuze athole ukuzinza kwakhe ngaphambi kwemidlalo ebalulekile.
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Izindaba zobuntu
Abaningi babheka ukuthi akayena umdlali obala kakhulu, noma ochwepheshe kakhulu, kodwa wonke umuntu uyavuma ngomsebenzi wakhe onzima nokuzimisela
U-Kimpembe uthanda imibono yokudala, akumangazi ukuthi i-Adidas imfake njengobuso buka-Adidas Glitch (isikhumba sangaphakathi esinezikhumba ezimbili ezingaphandle, okwenza umuntu ahlanganise izitayela) eParis
Umqeqeshi wakhe owayengumqeqeshi wezeMidlalo uke wabhekana nokukhulumisana kwakhe noKimpembe njengoba ehlonishwa ngokuzithoba kwakhe, isisekelo sawo wonke amagugu.
I-Presnel Kimpembe Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Pets
UKimpembe uthakazelisa izinja ezimbili okuthiwa u-Letty noNala lapho ehlala khona.
Ngaphandle kokuthatha izithombe zasendlini zezilwane zakhe ezifuywayo (noma abangane abathembekile) uKimpembe naye uthatha izithombe zangaphandle ze-duo abuye athumele ezokuxhumana nabantu.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda kwethu U-Presnel Kimpembe Indaba Yengane kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.